Diyaaradaha dagaalka Ruushka oo si aan kas ahayn duqeyn ugu dilay saddex askari oo Turki ah gudaha Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDiyaaradaha dagaalka Ruushka oo si aan kas ahayn duqeyn ugu dilay saddex askari oo Turki ah gudaha Suuriya
February 9, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Diyaaradaha dagaalka Ruushka oo si aan kas ahayn duqeyn ugu dilay saddex askari oo Turki ah gudaha Suuriya. [Sawirka: Archive]
Ankara-(Puntland Mirror) Saddex kamid ah ciidamada Turkiga ayaa si aan kas ahayn ugu dhintay duqaymo ay diyaaradaha Ruushku ka geysteen gobolka Al-Bab ee waqooyiga dalka Suuriya, duqaynta ayaa loola dan lahaa maleeshiyada ISIS, sida ay sheegeen milatariga Turkigu maanta oo Khamiis ah.
Taliyaha ciidamada Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in 11 askari ay sidoo kale ku dhaawacmeen markii diyaaraduhu si aan kas ahayn u duqeeyeen dhisme ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Turkiga.
Taliyaha ayaa sheegay in shilku uu dhacay maanta oo Khamiis ah.
Askartii dhaawacantay ayaa si deg deg ah loogu qaaday isbitaalka.
Khadka taleefoonka oo uu kula hadlay Madaxweyne, Recep Tayyip Erdogan, dhiggiisa Turkiga Vladimir Putin ayaa ka tacsiyeeyay dilkaas, sida ay bayaan ku sheegtay madaxtooyada Ruushka maanta oo Khamiis ah.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada hoggaamiye ay isku raaceen in la sameeyo wada-shaqayn milatari marka la sameynayo howlgalada ka dhanka ah maleeshiyada ISIS iyo ururada kale ee xagjiriinta ah ee ku sugan gudaha Suuriya.
Gobolka Al-Bab oo duqeyntu ka dhacday ayaa u dhow xadka koonfureed ee Suuriya la leedahay Turkiga.
March 24, 2017 Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo lix sanno kadib helay xoriyadiisa
Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo kulan la qaatay danjireyaal ka socda beesha caalamka
Garoowe-(Puntland Mirror) Meydka labo qof oo dhintay ayaa laga helay tuulo xeebeedka Daruuro ee gobolka Sanaag, sida dadka deegaanka jooga ay khadka taleefoonka ugu sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Labada meyd ayaa waxaa meel u dhow [...]
Tehran-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu isku dayayo in uu dab ku shido dhibbaatooyinka gobolka isaga oo ku boorinaya saaxiibkiisa Sucuudi Caraabiya in uu kahor tago Tehran. Hadal uu [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ku amartay dadkeeda shacabka ah in aysan aadi karin deegaanka ay colaadu ka jirto ee Tukaraq. Bayaan xalay kasoo baxay guddiga difaaca Puntland ayaa lagu sheegay in dadka shacabka ah aysan [...]